ဒီတစ်ပတ် မိသားစုစကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာတော့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံက မရွှေမိုး(ကိုးရီ – PVTV Myanmar
·4months ago ·11 Comments
ဒီတစ်ပတ် မိသားစုစကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာတော့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံက မရွှေမိုး(ကိုးရီးယား)၊ ပန်ဆယ်လို၊ CDM ဗိုလ်ကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ ဗိုလ်ကြီးလင်းထက်အောင်နဲ့ Captain Zero တို့ မောင်နှမတွေ စကားဝိုင်းဖွဲ့ဆွေးနွေးထားကြတာကို နားဆင်ကြရမှဖြစ်ပါတယ်။
Like – 5.7K, Share – 249
Royal Phyuthae says:
2021-09-19 at 3:13 PM
2021-09-19 at 3:34 PM
Chan Myae Myae Maw says:
2021-09-19 at 3:41 PM
ဘယ်နှစ်နာရီလဲဗျ သိတဲ့သူများ ပြောပေးကြပါ
2021-09-19 at 3:50 PM
ကျမအားကျရတဲ့ Hero များ
နားဆင်ချင်တယ် အချိန်လေး အလင်းပြပါ
Nway Oo Daung Ni says:
2021-09-19 at 3:59 PM
2021-09-19 at 4:54 PM
Tin Mg Soe says:
2021-09-19 at 6:53 PM
Pi ဆိုတာ ဘာလည်း မသိသေးသူတွေအတွက် အောက်ကစာလေးကို အချိန်ယူပြီးဖတ်ကြည့်ပါ။ ဖတ်ရန်ကြာချိန် ၃ မိနစ်။
✳️ Digital coin ငွေကြေးစုမဲ့သူတွေအတွက် အလားလာရှိတဲ့ Pi Coin အကြောင်းပါ
Pi Coin ဘာ​ကြောင့်စုသင့်သလဲ? ဆိုရင်
အဲ့ထဲက အဓိက အချက်တွေကတော့ –
1️⃣ Pi ကို google ကို တီထွင်တဲ့ Stanford University က PHD team ကတီထွင်တာရယ်
2️⃣ Pi ငွေကြေးရဲ့တန်ဖိုးက 2025 မှာ 1 – Pi Coin ကို USD 100$ ( မြန်မာငွေ= 150,000 ကျပ်) ခန့် လောက်ထိမြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းထားတာကြောင့်ရယ် …
3️⃣ ပညာရှင်တွေရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရ အနာဂတ်မှာ Pi Coin ဟာ ခုလက်ရှိမှာအအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့ Bit coin BTC ကို ယှဥ်ပြိုင်နိုင်ဖို့အလားလာအရှိဆုံးအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတာရယ် . . .
4️⃣ Pi ကိုတူးဖို့က ကွန်ပျူတာစက်ကြီးတွေမလိုဘဲ ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ရှိရုံလေးနဲ့ တစ်ရက်ကိုအချိန်စက္ကန့်ပိုင်းလေးပေးရုံနဲ့ တူးလို့ရမှာရယ် (စက္ကန့်ပိုင်းလေးဆိုတာက တစ်ရက်တစ်ကြိမ်ဝင် B Click တစ်ချပ်နှိပ်ရတာကိုပြောတာပါ ခက်ခဲတာမပါပါဘူး)
5️⃣ ခုလက်ရှိမှာ Mainnet မရောက်သေးပေမဲ့ စျေးသတ်မှတ်နေပါပြီ။ အဲ့တာကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် Pi က scam မဟုတ်တာသေချာသလောက်ရှိသွားပါပြီ။
6️⃣ ဒီလိုမျိုးအချက်တွေကြောင့် Pi Coin ကို တူးသင့်တယ်လို့ recommend ပေးရတာပါ။ Pi Coin တူးသင့်တဲ့အချက်က ဒါတွေဘဲလားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်လည်းအချက်တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်။
7️⃣ ယခင် Bit Coin အကြောင်း –
Pi coin နဲ့ဆင်တူတဲ့ bit coin အကြောင်း နည်းနည်းမျှ‌ ဝေချင်ပါတယ်။
Bit coin ကို2009 ခုနှစ်က တီထွင်ခဲ့ပြီး တစ်ရက်ကို bit coin အများကြီး free ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါကိုလူတွေက တန်ဖိုးမရှိဘူးဆိုပြီး မယူခဲ့ကြပါဘူး။
မယူခဲ့တော့ဘာတွေဆုံးရှုံးလိုက်ရလဲဆိုတော့ ခုချိန်မှာဖြစ်နေမယ့် Millioner ဘဝတွေကိုဆုံးရှုးလိုက်ရပါတယ်။
ဒီလိုဘာကြောင့်ပြောရလဲဆိုတော့အဲ့ချိန်က Free ပေးတဲ့ bit coin ရဲ့တန်ဖိုးက 0$ ပေမဲ့ ခု 2021 မှာ တော့ 1 Btc တန်ဖိုး က USD 30000$ ကျော် (မြန်မာငွေကျပ် သိန်း ၅၀၀ ကျော်) တန်ဖိုးရှိနေပါပြီ။ အဲ့တုန်းက လူတစ်ယောက်က သူ့ရဲ့ Bit coin ကို pizza တစ်ချပ်ကို 200 bit coin နဲ့ဝယ်စားခဲ့ပါတယ် ခုချိန်ပြန်ကြည့်ရင်သူဝယ်စားတဲ့ pizza ရဲ့တန်ဖိုးက 7million ဒေါလာ တန်ဖိုးရှိပါတယ် သူသာသိခဲ့ရင် အဲ့ pizza မျိုကျမှာတောင်မဟုတ်ပါဘူး။
အဲ့ချိန်ကကျွန်တော်တို့မမှီလိုက်ပေမဲ့ ခုအလားတူတဲ့ pi coin ကိုတော့မှီပါသေးတယ်။ pi coin free စုလို့ရတဲ့အခွင့်ရေးရှိနေရက်နဲ့ နောင်တစ်ချိန် pi coin တွေ​​စျေးတက်လာလို့ ငါ မစုလိုက်မိပါလားဆိုတဲ့ နောင်တရစရာ ကိစ္စရပ်ကြီးမဖြစ်ရအောင်ခု အချိန်ရှိတုန်း pi coin စုကြရအောင်။
(စကားမစပ်Pi coin က ဒီနှစ်ကုန် mainnet ရောက်ရင် free မရတော့ဘူး အတာကြောင့်အချိန်မှီသေးတယ်လို့ပြောတာပါ)
Signup လုပ်ရမယ့်Link ပါ
I am sending you 1π! Pi isanew digital currency developed by Stanford PhDs, with over 23 million members worldwide. To claim your Pi, follow this link https://minepi.com/tinmgsoe and use my username (tinmgsoe) as your invitation code.
Invitation Code​တောင်းရင် tinmgsoe လို့ထည့်​ပေးပါ